Fashil siyaasadeed iyo Khiyaamo Qaran oo ka soo shaac baxday aamusnaanti madaxda Somali State – Xeernews24
Fashil siyaasadeed iyo Khiyaamo Qaran oo ka soo shaac baxday aamusnaanti madaxda Somali State
Kulan aan caadi ahayn oo maanta si lama filan ah uga dhacay magaalada Diri-dhaba.
Sidaynu la socono waxaa beryahanba xasilooni daro soo foodsaartay aagga Galbeedka Sitti kadib markii ay canfartu mar kale iyadoo adeegsanaysa ciidanka federalka ay shirar khasab ah iyo calan taagis ka billaabeen. Shacabka geesiyiinta ah oo ay ka go’an tahay inaan taako dhulkaas ka mida la qaadan ayaa iska caabbin kala hortagay. Taasaana sababtay inuu Generalka oo ah taliyaha ciidamada Bariga iyo koonfurta Ethiopia Diredhaba yimaado oo dalbado inuu Ugaaska iyo duqayda Gandaha la kulmo.
– Ugaaska iyo odey dhaqmeedka Ganduhu waxay caddeeyeen mawqifkooda ku aadan dhulkaas iyo waliba taariikhdii lasoo maray ee ahayd sidii khaladka iyo khasab ka ahayd ee loogu wareejiyay gobolka aanay dhalashada iyo dhaqanka midna ka dhaxayn ee canfarta. Waxa kalooy tibaaxeen sida marwalba ay ciidamadu dhexdhexaadka uga ahaan jireen iyo sida ay maanta intan isbedelku yimid u noqdeen qaar taageera 100% xagga canfarta, u qafaala shacabka isla markaana garabtaagan deegaamaysiga ay canfartu ka wado galbeedka Sitti…
– Generalka oo ay u muuqato inaanu filayn jawaabahan ayaa ka sheekeeyay sida ay uga go’an tahay inay ammaanka sugaan kana warwareegay inuu taabto halka ay sartu ka quruntay… aakhirtaankiise ku qasbanaaday inuu runta sheego oo ku dhawaaqo “ Anaku waxaan nahay ciidan waxaana qaadanaa amar lana siiyo markaa saddexda magaalo anaka waxay noo qoran yihiin inay canfari leedahay maadaama dawladii hore ku wareejisay tanina afka uunbay ka tiri ee wax qoraala oo nasoo gaadhay ma jiro” wuxuu sii raaciyay waxaa kulmay madaxdiina oo ( Canfar iyo Soomaali) kuna kulmay xafiiska raysal wasaaraha amarkaas wax ka duwan oo soo baxayna mahayno.
– Waxaa caddaatay in wax badan oo inaga qarsooni jiraan iska markaana wax la marin habaabiyay taasoo sababtay dhimashada, dhaawaca iyo barakaca shacab masaakiin ah oon waxba galabsan .
Hadaba Ma Generalku been sheegaya oo isku dhufanaya shacabka iyo maamulka DDS? Mise maamulka ayaa galay heshiis hoosaad ay shacabka ka qariyeen oo belaayadaba sababay, warjiraaba cakaaruu iman waanse ka shaw qabay in ragga qaarkii sidii gashaanti weynaatay aamuska lagu meheriyay!
– Ugu damabayn waxaanu markii shanaad codsanaynaa inay dawlada DDS mawqifkeeda galbeedka Sitti caddayso si aan dad kale ugu sii dhiman
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/02/fashilaad.png 410 659 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-11-18 00:06:172019-11-18 00:06:44Fashil siyaasadeed iyo Khiyaamo Qaran oo ka soo shaac baxday aamusnaanti madaxda Somali State
Ma Burburka Itoobiya mise Badwaynta Dunida kusoo Fooleh? dhageyso laba codlaynta ONLF CADAANI IYO AXMAD YAASIIN